भुवन केसीसंग रीमा विश्वकर्माको रोमान्स्! - Gokarna News from Nepal
भुवन केसीसंग रीमा विश्वकर्माको रोमान्स्!
बुधबार, जेठ २२, २०७६ by गोकर्ण न्युज
काठमाडौं – नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा सदाबहार नायकको रुपमा चर्चित भुवन केसीले सिनेमा उद्योगलाई माथि उकास्न आफनो तर्फबाट देन गरेकै छन् । पछिल्लो ७ बर्ष यता पर्दामा नदेखिएका उनी फिल्म निर्माण र निर्देशनमा व्यस्त थिए । नब नायिकाहरुलाई लन्च समेत गरिरहेका भुवनलाई पर्दामा हेर्न चाहाने चाहना धेरै दर्शकहरुको पुरा भएको थिएन तर अब उनी नायकको रुपमा नै पर्दामा देखिने भएका छन् । यतिबेला उनकै छोरा अनमोल केसी नायिकाहरुसंग रोमान्स गरिरहेको बेला भुवनले भने आधी उमेरकी नायिकासंग रोमान्स गर्दैछन् ।
उनी मिस्टर नेपालीमा अनुबन्धित भएका छन् जुन फिल्ममा उनले रीमा विश्वकर्मासंग रोमान्स गर्ने भएका छन् । बुवाको भूमिकालाई लत्याउँदै आएका ६१ बर्षीय यी नायकले दोहोरो भुमिकामा बुवा र छोराको भुमिकामा काम गर्ने भएका हुन् ।
भुवनले रीमा आफनो मन पर्ने नायिका भएको भन्दै उनीसंग काम गर्ने अवसर जुटेकोमा खुसी व्यक्त गरे यता रीमाले पनि भुवन केसी जस्तो बरिष्ठ कलाकारसँग स्क्रिन सेयर गर्न पाउनु आफनो सौभाग्यको कुरा रहेको बताईन् । फिल्मलाई भने देव भुषालले निर्देशन गर्दैछन् । अनमोलको करियर सम्हाल्न आफनो अभिनय यात्राबाट टाढा रहेका भुवनको कमव्याक गर्न दर्शकहरु पक्कै आतुर रहनेछन् ।